Global Vision for Kimroy Bailey Group nke Companieslọ ọrụ - Kimroy Bailey Group
Ọhụụ nke Global maka ndị otu Kimroy Bailey
Ọhụụ nke Global maka ndị otu Kimroy BaileyKimroy Bailey2018-08-08T22:37:29-05:00
Dika odi na Heven, otua ka odi nelu uwa. Anyị ekweghị na mbibi na ọchịchịrị. Robots agaghịkwa eweghara ụwa niile. Chineke anyị na-eme ihe ngosi. Mgbe niile na mgbe niile!
Anyị na-ekwu ndụ na ụlọ ọrụ a. Anyị na-ekwu nsonaazụ dị mma n'ihi na anyị hụrụ n'anya na-atọ ụtọ na oke ọ awụ nke Chineke, ike, buru ibu karịa ọnụnọ ndụ. Popsie anyi, Chukwu di uku ma di ebube igwa ya okwu ma o choro ka ya na ndi ezinulo mmadu niile kwurita okwu. Ọ na-ekwu okwu mgbe niile; ọ bụ naanị ihe karịrị oge ahụ ka ihe a kpọrọ mmadụ kwụsịrị ige ntị.
Otu Kimroy Bailey Group na-ekwu okwu n'atụghị egwu. Anyi na-elekwasie anya na Chineke, anyi dabere na Chukwu, yabụ na nka na - eme ka ndi otu anyi ghara itu egwu nke uwa a
Ndị otu anyị bụ arịa maka ịdị mma nke Chineke na ịhụnanya maka ụmụ mmadụ ka e gosipụta ya n'uwa. A ga-eme ịhụnanya a nke Chineke chọrọ igosi dịka ọ chọrọ igosipụta ịdị mma ya ọ bụghị dịka echiche ụwa si mara ihe ịhụnanya Chineke bụ ma ọ bụ ka usoro mgbasa ozi siri gosipụta ịhụnanya Chineke.
Otu Kimroy Bailey bụ naanị otu n’ime ọtụtụ arịa ndị Chukwu nwere ike iji wee mezuo uche ya n’ụwa. Obi dị anyị ụtọ na anyị nọ n'okpuru ike Chineke.
Otu Kimroy Bailey siri ike n'ihi na Eluigwe di ike. Ọ pụtara na anyị na-eme ihe site n'okwukwe, okwukwe a na-amasịkwa onye isi anyị- Chineke Nna ahụ aka “Popsie”
Ndị otu anyị bụ arịa maka ịdị mma nke Chineke na ịhụnanya maka ụmụ mmadụ ka e gosipụta ya n'uwa. A ga-eme ihunanya a nke Chineke chọrọ igosi dịka ọ chọrọ igosipụta ịdị mma ya.
Otu a ga - ewepụta ọtụtụ akụ na ụba gụnyere ma ejedebeghị na: ego n'ụlọ akụ, ala ndị bara uru, akụrụngwa ọgụgụ isi bara ụba & ihe ọhụụ, ụdị na ọ nwere ike ibinye mba niile ego ma ọ nweghịkwa mgbe ị gbaziri. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbaziri ego, anyị ga-agbaziri ego ma anyị agaghị achọ ịgbazinye ego.
Companylọ ọrụ anyị maara na ọ nwere ike ihu igwe ọ bụla n'ihi na Chineke nọnyeere anyị. Chineke wuru ụlọ ọrụ a, naanị na ọ ga-adọwa ya. Ọ bụrụ na o mee nke a, ya bụ ihe ga - eme ya, ọ bụ ya mere ọ ga - eji bụrụ Chukwu. Ma ọ bụrụ na o mere, ọ ga-ewulite anyị ọbụna karị na nke ahụ bụ akụkụ dị egwu. Ee Ee Nnukwu Nwa na Mma!
Otu Kimroy Bailey ga-ewetara ụwa ọrụ dị iche iche, nke kachasị mma na ngwaahịa dị mma n'akụkụ niile nke ọtụtụ ndị Azụmaahịa. Anyị ga-eme nke ọma n'ihe niile anyị na-eme.
Ndi Kimroy Bailey Group ga-enwe ihe nzuzo nke Kimroy Bailey na Sherika Trott-Bailey na ụmụ ha: Keilah Abigail Bailey na Baileys na-abịa. Ha bụ akụkụ nke ndị Chineke fọdụrụ n’ụwa nọ n’ụwa na kwa ọgbọ ha.
ọ bụrụ na ụjọ na-atụ anyị, ọ bụrụ na anyị na-atụ egwu, ọ bụrụ na anyị na-enwe obi abụọ na ọ naghị agbanwe eziokwu ahụ bụ na Ihe niile dị mma, Oge niile na Popsie ka dị n'aka, ha ka nwere ikike niile, ọ ka maara ihe niile, ka dị ugbu a.
Ọhụụ ụwa anyị dị nfe- Ime azụmahịa na usoro na ala eze nke Eluigwe ga-esi rụọ ya. Dika esi eme ya n’eluigwe, otua ka odi n’elu uwa.
O nweghi echiche / echiche banyere Chineke ga-adị ka azụmaahịa- na-esite n'aka ụka ndị guzobere, akwụkwọ nsọ, otu azụmahịa, ndị isi azụmahịa, ndị isi okpukperechi, ndị agha na-emegide, usoro mgbasa ozi wdg agaghị enwe ikpe ma ọ bụ ịma anyị ikpe. Y’oburu na anyi tugharihie ma obu imehie uzo ka Eluigwe ga - abata. Eluigwe achoghi onye nzoputa ma obu onye nche.